Cable Connectors Zvino Lugs Manufacturers uye Suppliers | China Cable Connectors And Lugs Factory
The pasi voltage wire connectors (mamwe rinonzi waya ruoko) yakagadzirwa kuti zvemagetsi aparadzirwe pamusoro simba mitsetse 1 KV. Jera mutsetse vakadzidza guru siyana yakaderera voltage connectors, pamwe pamagungano siyana uye nzira basa. Tava chinozoiswa kupfuura rakakodzera waya jointing nenhumbi nechinangwa kugumiswa uye kubatana zviri kufamba mitsetse
Tine zvinotevera kuwanda waya connectors uye nenhumbi:
* Sheari musoro bhaudhi connectors
The pasi voltage wire lugs inoshandiswa waya conductors pamusoro zvemagetsi mitsetse 1 KV. Jera akaongorora zvakawanda waya lugs, kuti zvakagadzirwa zhinji uye vemapato basa uye vakava vazhinji akakodzera nechinangwa kugumiswa uye maererano nokuda hutachiwana mutsetse.
Tine zvinotevera mhando waya lug:
* Sheari musoro bhaudhi wire lugs
Rakajairika hukuru nokuti fura musoro bhaudhi wire lugs vane 10 kusvika 240 mm2, nokuti pre-insulated waya lugs vane 10 kusvika 95 mm2. Izvi zvinhu unotipa kupa iwe chigadzirwa kupfuura akapedza chikuva siyana kana netambo.
Tinobudisa fura musoro wire lugs kubva simba yakakwirira, ngura nemishonga aruminiyamu zvinhu.
Sheari musoro bhaudhi lug CLBV 25-50
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 10-25
Sheari musoro bhaudhi lug CLBV 120-300
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 25-50
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 35-150